Thenga Uhlu lwe-imeyili lwe-DJ | Database lakamuva lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili lwe-DJ
Ikheli le-imeyili le-DJ
Uhlu lwe-imeyili lwe-DJ olunolu hlu oluholayo lwama-jockeys e-disc. Yabelana ngemisindo emnandi yomkhiqizo noma yensizakalo yakho eqenjini elikhulu lomuntu ngamunye noma lebhizinisi. Uhlu lwethu lwe-imeyili ye-DJ luqukethe oxhumana nabo obadingayo ukuze baphonse iqembu elimangazayo le-B2B. Futhi, thumela okunikezwayo okubonisa uhlelo lokusebenza lokubhuka, noma ukuzama ukunikela insizakalo eyingqayizivele kubakhiqizi bomculo ngamunye ngamakheli e-imeyili e-dj. Uzothola i-100% imininingwane yokuxhumana yebhizinisi enembile. Okubaluleke kakhulu uma ungasebenzisa uhlu lwamakheli olusebenzayo futhi oluvuselelwe.
Lolu hlu lwe-imeyili luqukethe kuphela imininingwane yokuxhumana ye-dj esebenzayo. Uzosebenzisa lolu hlu lwe-imeyili ukukhuthaza ibhizinisi lakho. Ngakho-ke qala imikhankaso yakho ku-DJ. Database lakamuva lingakusiza ekutholeni inhloso ofuna ukuyenza emkhakheni wokuthengisa online. Ungathola okuhle database imeyili kusuka lapha. Phezu kwayo yonke imininingwane yohlu lwe-imeyili
Thenga Izinhlu Zokuxhumana ze-DJ
Inani Lamarekhodi: 344
Ingqikithi yezindleko: $ 98 (imali yesikhathi esisodwa)
Uhlu lwe-imeyili lo-DJ Umbuzo nezimpendulo